Saddex idaacadood oo ku yaalla Galkacyo oo xalay la weeraray iyo mid ka mid raggii falkaasi ka dambeeyey oo la qabtay. – Radio Daljir
Saddex idaacadood oo ku yaalla Galkacyo oo xalay la weeraray iyo mid ka mid raggii falkaasi ka dambeeyey oo la qabtay.
Janaayo 16, 2010 12:00 b 0
Galkacyo Jan 16- Weeraro loo adeegsaday bambaanooyinka gacanta laga tuuro ayaa xalay fiidkii lagu qaaday saddex idaacadood oo ku yaalla magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kuwaasi oo ah idaacadaha maxaliga ah ee laga dhagaysto magaalada.
Weerarkaan oo sida la sheegay ay ku fuliyeen dad ku hubaysnaa bambaanooyinka ay tuureen, ayaa lala beegsaday idaacadaha Radio Galkacyo, Codka Mudug iyo idaacadda Hobyo oo dhammaantood ah idaacado laga dhagaysto magaalada Galkacyo marka laga reebo Radio Galkacyo oo xarun kale ku leh magaalada Garoowe.
Mid ka mid ah raggii ka danbeeyey weerarada idaacadaha ayaa la sheegay ciidanka ammaanku in ay gacanta ku dhigeen , kaasi oo hadda lagu hayo saldhig ku yaalla magaalada su?aalana laga weydiinayo ku lug-lahaanshihiisa weeraradii xalay.
Bambaanooyinka lagu hal-gaaday idaacadaha ayaa tiradoodu dhan tahay illaa 5 bam gacmeed, kuwaasi oo labo ka mid ah lagu tuuray idaacadda Codka Mudug, halka idaacadda Galkacyo-na lagu tuuray labo kale, sidoo kalana idaacadda Hobyo ayaa iyana lagu tuuray hal bam gacmeed, waxaana bambaanooyinkaasi wax ku noqday dhawr qof, sidoo kalana dhismayaasha idaacadaha ayaa wax ka soo gaareen qunbuladaha lagu tuuray.
Illaa 3 qof oo ka tirsanaa idaacadaha la weeraray ayaa dhawacyo aad u fududi ka soo gaareen weeraradii bambaano ee xalay, waxaana labo ka mid ah dadka dhaawacmay ay ka mid ahaayeen shaqaalaha idaacadda Codka Mudug oo uu mid ka mid ah yahay wariye halka midka kalana uu yahay illaalada idaacadda sida ay noo xaqiijiyeen mas?uuliyiinta idaacadda Codka Mudug.
Qofka kale oo isna dhaawacmay ayaa ka tirsanaa idaacadda Hobyo oo iyana lagu tuuray hal bambaano, halka bambaanooyin labo ah oo lagu tuuray idaacadda Galkacyo-na aysan cidna wax ku noqon marka laga reebo burbur kooban oo soo gaaray saqafka kore ee dhismaha ay idaacaddu deggan tahay.
Ma cadda sababta rasmiga ah ee loo bartilmaameedsaday idaacadaha, hase ahaatee waxaa la aaminsan yahay weerarkaani in uu qayb ka yahay weerarada indho la?aanta ah ee inta badan ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya, kuwaasi oo galaafta nolosha dad badan oo aan waxba galabsan.
Ciidamada bileyska ee magaalada Galkacyo ayaa haatan wada baaritaanno dheeraad ah oo lagu hubinayo cidda ka danbaysay weeraradii xalay, waxaana kor loo qaaday ammaanka idaacadahha ku yaalla magaalada Galkacyo kadib weerarkii xalay.
Waa markii ugu horraysay oo weerar noocaan oo kale ah lagu qaado idaacad ku taalla magaalada Galkacyo, waxaana falalkaan cambaareeyey mas?uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland oo uu ka mid yahay wasiirka warfaafin Puntland oo C/xakiim Axmed Guuleed oo falkaas ku tilmaamay mid waxashnimo ah.